Ny efijery LED Poster ivelany China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana Poster Led,Tariho Billboard Sign,Ny vidin'ny efijery Led
Home > Products > Led Kiosk Poster > Famoahana vita amin&#39;ny gorodona ivelany > Ny efijery LED Poster ivelany
Ny LED ivelany dia mifandray amin'ny seranan-tsambo amin'ny solosaina miaraka amin'ny tariby tambajotra. Ny premise dia ny hoe tsy maintsy mifandray ny solosaina. Kitiho ny rindrambaiko eo amin'ny solosaina mba hamoronana varavarankely. Ny tena zava-dehibe dia mila fantatrao hoe firy ny teboka ao amin'ny LED ny halavany sy ny sakany. Ampidiro ao anatin'ny varavarankelin'ity andalana ity ny teninao. Soraty ny halavany sy ny sakany. Amin'ny ankapobeny, ny halehiben'ny tompo dia 16 isa. Tokony haseho eto ambany ny endri-tsoratra, habe, lamina ary hafainganana. Aorian'ny fametrahana azy dia jereo raha tsy mety izany. Tehirizo ny rakitra rehefa vita.
Fampisehoana Poster Led
Tariho Billboard Sign
Ny vidin'ny efijery Led
Fampisehoana Totem Led
Fampisehoana Mesh Led